Madagascar Actualités | L'information en continue - Part 10
“Tsenabe lojy mitsangana sy voamaina”: maneho ny mampiavaka azy ny faritra Boeny
1 jour ago	Commentaires fermés sur “Tsenabe lojy mitsangana sy voamaina”: maneho ny mampiavaka azy ny faritra Boeny
« Antsika jiaby miasa hampiakatra ny fari-piainan’ny tantsaha, hampandroso ny toekaren’ny faritra ». Izany ny lohahevitra entina hanamarihana ny “Tsenabe lojy mitsangana sy voamaina”, andiany faharoa. Hanomboka rahampitso 28 hatramin’ny 30 jolay, izany fotoana izany, ao Ambondromamy, distrikan’Ambato-Boeny. Ny 22 jolay 2017, nitondra fanazavana ny mpikarakara ny foara, avy amin’ny faritra Boeny, Tranoben’ny varotra sy ny indostria, […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Fofifa Cala – Alaotra Mangoro Avotra amin’ny masomboly fa mbola betsaka ny olana
1 jour ago	Commentaires fermés sur Fofifa Cala – Alaotra Mangoro Avotra amin’ny masomboly fa mbola betsaka ny olana
Tsy lafiny iray fotsiny no mila hetsehina ho fampandrosoana ny fambolena. “Efa ahafahana mamokatra tsara amin’izay raha tahin’Andriamanitra ny Foibem-paritry ny fikarohana momba ny fampandrosoana ny ambanivohitra (Fofifa-Cala) aty Alaotra, taorian’ny fanampian’ny Japoney, natolotra nandritra ny foara Tangorona teo”, hoy ny tale, Dr Razafindrakoto Charlotte. Lafiny roa ny tiany ho tondroina amin’izany : azo antoka izao […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Ampinga: « Tsy voatery hoe te ho mpikabary ireo mianatra izany »
1 jour ago	Commentaires fermés sur Ampinga: « Tsy voatery hoe te ho mpikabary ireo mianatra izany »
Nentanina ny fampianarana kabary mba tsy hahavery ity kolontsaina sy fomba mampiavaka antsika malagasy ity. Ankehitriny, miroborobo izany, raha ny fahamaroan’ny fikambanana mampiofana, izay miparitaka amin’ny faritra maro, indrindra eto an-dRenivohitra, no jerena. Azo lazaina ho tratra ny tanjona. Niara-dalana tamin’izany, manaraka ny fivoaran’ny fiarahamonina sy ny asa aman-draharaha andavanandro ihany koa ny fianarana kabary. […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Régis Gizavo: nampihetsi-po ny fiandrasana ny razana
1 jour ago	Commentaires fermés sur Régis Gizavo: nampihetsi-po ny fiandrasana ny razana
Tonga an-tanindrazana, nomem-boninahitra tetsy Mahamasina ary mihazo an’i Toliara anio ny nofo mangatsiakan’i Régis Gizavo. Fisaonam-pirenena, araka izany, ny anio. Nigadona an-tanindrazana, omaly maraina, ny vata misy ny nofo mangatsiakan’i Régis Gizavo. Vao teny amin’ny seranam-piaramanidina dia efa nampihetsi-po ny fitsenana ity andrarezin’ny mozika malagasy lavo an-tsehatra ity. Nitsena ny razana sy ny fianakaviany ireo […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Ambohitrimanjaka: rongony 400 kilao nodoran’ny polisy
1 jour ago	Commentaires fermés sur Ambohitrimanjaka: rongony 400 kilao nodoran’ny polisy
Notanterahin’ny polisy misahana ny ady amin’ny fidorohana zava-mahadomelina eny Anosy, omaly tamin’ny 11 ora maraina, teny Ambohitrimanjaka, ny fandorana ireo rongony tratran’izy ireo nandritra ny volana jolay. Rongony milanja 400kg ireto lasa lavenona ireto. Nanatrika izany ny solontenan’ny fitsarana, ny mpitsara Andrianarivony Nirina. Andaniny, voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria boriboritany faharoa, ny lehilahy […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Assist miady amin’ny orinasa Ambatovy. lalàna tsy mitombina ny hitsarana ny raharaha
1 jour ago	Commentaires fermés sur Assist miady amin’ny orinasa Ambatovy. lalàna tsy mitombina ny hitsarana ny raharaha
Mitohy ihany ny fifandonana eo amin’ny orinasa Ambatovy sy ny Assit. Hatrany am-boalohany efa hita soritra ihany ny fomba ratsy entin’ny Assist, izay voaporofo aty aoriana. Andrasana izao ny didim-pitsarana, koa mbola tsy tapaka na hotazonina hatao antoka na tsia izay nokasaina hanaovana izany. Efa fantatra aloha fa raha ny fahazoana mitsara ity raharaha ity, […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Androhibe: jiolahy tratra nangalatra tao amin’ny Mompera
1 jour ago	Commentaires fermés sur Androhibe: jiolahy tratra nangalatra tao amin’ny Mompera
Nidoboka am-ponja, omaly rehefa avy natolotra ny fampanoavana ny jiolahy iray antsoina hoe Jules, 42 taona voarohirohy ho nangalatra tao amin’ny tokotanin’ny mompera ao Androhibe. Araka ny fanazavan’ny polisy, tratra namaky trano sy nangalatra tao amin’ny Mompera ao Androhibe ity jiolahy ity. Polisy nanao fisafoana no nahatsikaritra azy ka nosamborina avy hatrany. Mbola tratra teny aminy […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Mpirakidraharaha – Fitsarana Anosy: nnarivony isan’andro ireo antontan-taratasy kirakiraina
1 jour ago	Commentaires fermés sur Mpirakidraharaha – Fitsarana Anosy: nnarivony isan’andro ireo antontan-taratasy kirakiraina
Mahatratra anarivony isan’andro ireo antontan-taratasy kirakirain’ny mpirakidraharaha eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany eny amin’ny lapan’ny Fitsarana Anosy. Isan’izany ny casiers judiciaires miampy ireo antontan-taratasy maro samihafa. “Antontan-taratasy hatrany amin’ny 2 000 raha kely indrindra no enjehina atao sonia isan’andro ary tsy miala eo raha tsy vita izany. Mbola mihoatra noho izany aza ny antontan-taratasy atao sonia […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Ankadindravola – Ivato: nifanjevo ny taxi-be D sy 114
1 jour ago	Commentaires fermés sur Ankadindravola – Ivato: nifanjevo ny taxi-be D sy 114
Raikitra ny gidragidra teo amin’ireo taxi-be mampitohy an’Ivato sy ny taxi-be 114, omaly. Nosakanan’ireo taxi-be mampitohy an’Ivato teny Ankadindravola ireo taxi-be 114 ka niafara tamin’ny tabataba sy horakoraka izany. Nitokona tsy nety niasa mihitsy ireo taxi-be zotra D mampitohy an’Ivato. Antony, nisy ny didy navoakan’ny teo anivon’ny kaominina Ivato fa afaka miditra mitatitra olona hatrany […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Ankazobe: tratra ireo jiolahy mpanakan-dalana amin’ny vatobe
1 jour ago	Commentaires fermés sur Ankazobe: tratra ireo jiolahy mpanakan-dalana amin’ny vatobe
Nidoboka am-ponja ao amin’ny fonjan’Ankazobe, ny alatsinainy teo ireo jiolahy miisa dimy tratra teo am-piomanana nanangona vatobe hanaovana sakana eo amin’ny RN 4 PK 104 Ankazobe tamin’ny 10 ora alina… Noraisim-potsiny! Saron’ny zandary ireo dimy lahy malaza ratsy amin’ny fanakanan-dalana eny amin’ny lalam-pirenena mihazo an’i Mahajanga. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, avy namaky trano […] Powered by Madagascar Actualitéa	Lire la suite »
Page 10 sur 3 692« Début...«89101112	»	203040...Fin »	Publicité